तपाईंको थर कसरी सुरु भयो? जान्नुहोस्। – Chakra Jwala
तपाईंको थर कसरी सुरु भयो? जान्नुहोस्।
Posted on 26 Dec 2015 26 Dec 2017 by Chakra Bhandari
कुनै बेला अहिले चलन चल्तीमा रहेका थरहरु सरकारी कामका पद, स्थानको नाम, दर्जा लगायतका मानविय विषयसँग जोडिएका विषय थिए। खास गरि खस उद्गम स्थलमा थरको सुरुवात भएको मानिन्छ। सरकारी पदहरु, विभिन्न भुगोल र स्थानबाट बनेका थरहरु यस्ता छन्।
सरकारी दर्जाबाट उत्पत्ति भएका थरहरू:
बुढा – सैनिक दर्जा,
अधिकारी– दराको हाकिम,
महत – ग्राम प्रमुख,
रोकाया – महतको सहयोगी,
राना – सैनिक दर्जा,
भट्ट – राज पुरोहित वा मन्दिरका नाइके पुजारी,
भण्डारी – राजकीय कोषको प्रमुख,
लेखक – लेखक,
कार्की– राजस्व अधिकृत
थापा – सैनिक दर्जा,
खड्का – सैनिक दर्जा,
बस्नेत – सैनिक दर्जा,
नेपालमा खस भाषाको विकास सिञ्जा उपत्यकाबाट भएको मानिन्छ। कर्णालीका विभिन्न स्थानहरुलाई आधार मानेर पनि विभिन्न थरहरुको विकास भएको छ।
तिमिल्सैन– तिमिल्सिना, तिम्सिना,
रिमा– रिमाल, रसाईली,
बयाना– बनियाँ, बानियाँ,
खार– खरेल, खराल,
Previous Post आज “क्रीस्मस डे”
Next Post मधेसलाई टुक्राउने अभिव्यक्ति दिदै हिड्नेहरु “देशद्रोही” हुन्।